Pashure pekufungidzira kukuru, Ryzen 7 1700X uye Ryzen 7 1700 CPUs pakupedzisira pano. Indaneti yave ichichera kubvira pakatanga uye kwete zvose zvave zvichinyatsofarira zvekuvakwa patsva. Zvakaitika kwandiri zvekare zvakange zvakanaka, chaizvo, uye ndinonzwa AMD yakapa nguva iyi. Kuenda mukubudirira vaive nechinangwa chakanaka cheC 40% IPC (mirayiridzo neawa yega) kuwana pane "Mucheri," chizvarwa chekupedzisira mumugariro wavo weK15. Saka AMD yakaungana boka rinotyisa revanjiniya ndokuenda kunoshanda.
Kugadzira imwe CPU kubva pasi pasi haisi basa duku uye rinotora nguva. Basa revhu rakaiswa mu2012 apo AMD yakaunza Jim Keller pabhodhi kuti atungamirire boka rekugadzira. Zvinhu zvakaratidzika zvakanyarara zvikuru kwenguva refu mumusasa we AMD, uye kwemakore matatu zvese tanga tive neinternet runyerekupe nekunyunyutira kusvikira zuva rino rakawira webhu.
Icho chaiva chimwe chiziviso. Saka mavambo akawanda e AMD uye ose awo akabatanidzwa mune zvisikwa zvose zvitsva. Ichi chikuru. AMD yakatora zvakapetwa kanopfuura kamwe uye yakabhadharwa kwavari: iyo pane kufa memory controller (IMC) iyo yakavandudza zvakanyanya kuchembwa kwekutarisa uye kuiswa kwe AMD64 iyo yakawedzera 64 bit computing zvigadziro kumapurani eX86 akange aripo. Saka ngatifambisei mberi ku2017. Mutambo we AMD wakabhadhara here?
Mukufunga kwangu, zvakanyatsoitika. Ikusimbiswa kwekuita kwepamusoro pemitemo yangu yeFX inoshamisa. Kushanda kwavo kwe SMT (Simiro-Multi Multi-threading) yakanyatsoshanda uye pamusoro pekuti vakaderedza TDP zvikuru. Maererano na AMD vakarova vavariro yavo yekuwana 40% IPC kuburikidza nehuwandu 12%.
Tsanangudzo uye Zvimwe
Saka regai kutarisisa zvakanyanya maC CPUs andinayo nhasi, Ryzen 7 1700X uye Ryzen 7 1700. Ini ndichakurumidza kupfurikidza nemashoko akataurwa ega ega uye kuti sei akasiyana kubva kune mumwe. Iyo Ryzen 7 1700X uye Ryzen 7 1700 yakafanana nehanzvadzi yavo huru Ryzen 7 1800X munzira dzose kunze kwemaawa ekutanga uye kukurumidza kukurumidza. Iyo Ryzen 7 1700 ndiyo chete yevatatu avo vasina XFR (eXtended Frequency Range) teknolojia iyo ichasimudza mazamu nekusimudzira maawa ne 100 MHz chero bedzi kupora kwako kwakakwana. Kuva Ryzen 7 octo-core CPUs ivo vose vanogovana zvivakwa zvakafanana, zvinyorwa zvekuchengetedza uye PCIe nzira. Kuti uwane mamwe maitiro ezvimwe zvinhu uye kuputsika kwavo kunonoka kusvika kune ATMINSIDE's kudzokorora kwe Ryzen 7 1800X.
AMD Ryzen 7 1700 Speeds
Base Clock Dhigiri, 8 Cores 3.4 GHZ, 3.5 GHz XFR
Kuwedzera Clock Speed, 2 cores 4 threads 3.8 GHZ, 3.9 GHz XFR
Base Clock Dhigiri, 8 Cores 3.0 GHz
Kuwedzera Clock Speed, 2 cores 4 threads 3.7 GHz
AMD Ryzen 7 Rondedzero
Mirayiridzo Yakaiswa 64-bit
Mirayiridzo Yakarongedzwa SSE 4.1 / 4.2 / 4a, AVX2, SHA
Transistor Count 4.8 mabhiriyoni
L2 Cache 4 MB (512 KB pamusana)
L3 Cache 16 MB (8 MB neCCX)
Max Memory Memory 128 GB
Mamwe Memory DDR4-2400
# ye Memory Memory 2
ECC Memory Support Aihwa
Max # ye PCI Express Lanes 24 Lanes
Zvakanaka, regai tiende munyama yezvinhu uye tione kuti idzi idzi mbiri dzeCU dzinogona kuita. Ndine mhando yezvibvumirano zvakakonzerwa kuti ienzanise maviri Ryzen 7 CPUs kune mumwe nemumwe, Intel i7 7700k, Intel i7 5960x, uyewo guru 10 core 20 thread i7 6950x kungoona kuti vanoenzanisa sei. Sero yekutanga yezviyero ndeyekubuda kunze kwebhokisi ine mhemberero yakagadzirirwa DDR4 3000 CL15-15-15-35. Iye zvino nekuda kwezvibvumirano zveBIOS uye kushaikwa kweDDR4 3000 muparadzi, kuyeuka pa AMD set-ups kunoitwa pa2933 CL15-15-15-35. Izvozvo zvichiti, ngatitarisei hardware inobatanidzwa mu test our set-ups.
CPU i7-7700K i7-5960X i7-6950X
Motherboard GIGABYTE Z270X-Gaming 8 GIGABYTE X99 SOC Champion MSI X99A Gaming Pro Carbon
ndangariro Corsair Vengeance LPX 2 × 8 GB DDR4-3000 15-17-17-35 G.SKILL Ripjaws4 4 × 4 GB DDR4-3000 15-15-15-35 G.SKILL Trident Z 4 × 8 GB DDR4-3200 14-16-16-35
chengetedzo OCZ Trion 150 480 GB Samsung 850 EVO mSATA 250 GB OCZ Trion 150 480 GB
Magetsi EVGA SuperNova G2 850 W Superflower Leadex 1 kW Seasonic Platinum-1000
Video Card EVGA GTX 980 Ti FTW GAMING EVGA GTX 980 Ti Classified GIGABYTE GTX 980 Ti Xtreme Gaming
kutonhora CoolerMaster Glacer 240L Inotonhorera Master Hyper 212 Evo Custom Loop ne EK LTX CPU Block uye 5.120 Radiator
CPU AMD Ryzen 7 1700, Ryzen 7 1700
RAM G.Skill Trident Z 2 × 8 GB DDR4 3600 CL17-18-18-38
Graphics Card EVGA GTX 980 Ti K | NGP | N Edition
chengetedzo Samsung 840 EVO 120 GB
Magetsi Superflower Leadex 1 kW
Kungokurumidza shoko pano pamusoro peAIDA64 test suite. Panguva yekunyora iyi AIDA64 haina kunyatsotsigira hutsva hutsva hweAmd Ryzen. Nokudaro zviyero zvekuedza zvaive zvakashata uye zvisingaenderani. Sezvo, izvozvi hatisi kuzova nemigumisiro yemuedzo panguva ino.
Kubva kutanga tinotarisa kumwe kudhinda uye mavhidhiyo kushandura mabhenikirwo. Izvi zvinyorwa zvekuedza zvinogona kunyatsogadzirisa ma-CPUs akawanda uye mamwe mapepa ari nani. Yekutanga girafu icharatidza CPUs iri muhomwe uye yechipiri ichava iyo CPUs yakavharwa ku 4.0 GHz ichibvisa chero ruzivo rwepamusoro peko CPU kasi. Zvose zvikamu zvakabviswa kubva muRenzen 7 1700X iri 100% uye inosara CPUs inoremerwa nayo.
R7 1700 @ 3.0 GHz 15.6 1433 3112.33 36.08 34809
i7 7700k @ 4.2 GHz 10.07 918 1960.54 33.25 25772
Tichitarisa mhinduro dziri kumusoro uye pasi tinogona kuona tsvina ye20 yeI7 6950x ine tsanangudzo yakajeka muidzo dzakawanda uye rutivi rweIntel runofamba yose 7Zip zvose zviri zviviri uye zvakapfekedzwa. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti mwana wehama R7 1700 pachiganda inoratidzika kunge yakarurama pairi ne i7 5960x apo vose vari vaviri vari kutarisira maitiro avo. Rimwechete rakapfekedzwa yose AMD Ryzen 7 CPUs inopa 6950x mhando yakanaka kwazvo yemari yacho. Kutaura nezvemari, Ryzen 7 1700X uye Ryzen 7 1700 inouya nechezasi pasi pevadzidzi vavo veIntel pa $399.99 uye $ 329.99 paNewegg.com sezvakaita nhasi. Enzanisa izvozvi ne $ 1069.65 yeI7 5960x uye iyo $pping 1649.99 yeI7 6950x, iyo AMD Ryzen 7 mutsara inoratidzika seyiyo yakanaka kwazvo ye buck kune ani zvake anoda ruzivo rwakasiyana-siyana rwehutano hutambo 16.
Cinebench R11.5 / R15, POVRay, x265 (HWBot), 7Zip - 4.0 GHz
R7 1700X @4.0 GHz 19.71 1783 3632.71 44.95 42267
R7 1700 @ 4.0 GHz 19.69 1778 3615.88 44.67 43032
i7 7700k @ 4.0 GHz 9.62 876 1868.69 31.76 24796
i7 5960X @ 4.0 GHz 16 1457 3226.67 34.16 46867
i7 6950X @ 4.0 GHz 22.42 2067 4162.27 40.44 58425
Ndinoda kuona pano kuti Ryzen 7 1700X uye Ryzen 7 1700 dzakamhanya paAUSUS ROG Crosshair VI Hero uye panguva ino yakavapa mukana muduku nekugadzirisa kuyeuka. Izvozvo zvichajekesa zvimwe zvekusiyana kwauchazoona mune zvikwereti zvakaputika kana zvichienzaniswa ne Ryzen 7 1800X. Nenzira yakawanda, zvisarudzo zvekuyeuka zvishoma panguva ino. Zvimwe pane izvi gare gare.
Kutevera, 2D zvikwangwani nenzira ye SuperPi uye wPrime.
R7 1700X @ 3.4 GHz 11.12 572.838 5.113 96.107
R7 1700 @ 3.0 GHz 13.67 699.619 5.67 104.611
i7 7700k @ 4.2 GHz 8.796 463.495 5.201 153.589
Sezvaunogona kuona muSuperPi yekutengeswa kana kuputika kweIndaneti kune zvakakosha pano asi kwete nehombe. Kuenda kune wPrim results, Ryzen CPUs yakaisvonaka kunyange i7 5960x. Kungofanana nedare redu rekare rekuongororwa, mapepa anoverengeka muchiratidzo ichi kupa i7 6950x tsanangudzo yakajeka asi kushayikwa kwemakumbo kwakanaka pachena kutarisa i7 7700k. Iyo Ryzen7 CPUs ichiri kuita zviratidzo zvakanaka. SuperPi uye wPrime zvose zvakanyanya zvakakanganiswa nemakondohwe emakondohwe uye kushanda. Sezvandakambotaura munyaya iyi, pane imwe nzvimbo yekuvandudza pano uye AMD iri kushanda zvakaoma kugadzirisa izvi.
SuperPi 1M / 32M, wPrime 32M / 1024M - 4.0 GHz
R7 1700X @ 4.0 GHz 10.312 536.884 3.106 83.73
R7 1700 @ 4.0 GHz 10.407 539.482 3.093 84.013
i7 7700k @ 4.0 GHz 9.219 477.622 5.343 160.868
i7 5960X @ 4.0 GHz 9.129 475.776 3.201 90.499
i7 6950X @ 4.0 GHz 9.2 473.106 2.473 66.352
Kungokurumidza kutaura pamusoro pePC (Mirairo Per Clock). Nechizvarwa chekupedzisira cha AMD chikwata ichi chaiva nzvimbo isina simba kwavari uye ivo vakaramba vachirasikirwa shure kweIntel nepamusoro. Ndinofunga kuti zvakachengeteka kutaura kuti vakasimudza mitambo yavo uye vakavhara iyo gaka. Sezvauchaona, kunze kwe7Zip, nzvimbo yeIntel yakanaka. Ini ndicharega slide inotevera ichitaura.
Rimwe Thread IPC Kuenzanisa Girafu
Yese miedzo yemutambo yaishandiswa pa 1920 × 1080 uye 2560 × 1440. Tapota ona yedu kuongorora nzira kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemutambo wemutambo.
Ashes of the Unity DirectX12
Kubuda kweTomu Raider DirectX12
Endai kune zvinhu zvinonakidza
Sezvauchaona mune zvidhidhira zvinotevera, kutamba kwekambiso yeRenzen 7 CPU inenge yakafanana kune dzose zvitatu zvinotarisirwa. Vanomhanyawo zvigunwe kusvika kune zvigunwe ne i7 6950x pa 1080p uye 1440p zvisarudzo. Ndakatora nzvimbo dzeIntel i7 7700k pane 4.0 GHz panzvimbo yeR7 1800X kungofananidzwa chete. Nhamba dze1800X dzakarurama maererano neshamwari uye ndakafunga kuti izvi zvingave zviri nani kuratidzwa kwekuita mitambo.
Tichitarisa mitsva ye 3DMark Firestrike Extreme, nhamba dzakawanda dziri pedyo zvikuru nezvose CPUs. Misiyano iri muedzo yefizikiki apo mamwe magetsi anonyatsobatsira kana iwe unogona kuona nemigumisiro.
Zvechokwadi, ndingadai ndakatora vashandisi avo vanobvuma iyi yemajura ekutamba haisi iko kushandiswa kukuru kwegadziriro. Izvi zvinoratidza kuti kana basa rechokwadi raitwa, unogona kukanganisa uye wozorora zvishoma. Kubheta ichiri chisarudzo uye hachizotambudziki zvishoma.
Hapana kana "stock" voltage inokosha ye Ryzen, pamusana pokuti inoshanda sei, kusimbisa yako kutanga magetsi kana iwe pachako uchiisa vCore. Sezvo zvakadaro, iyo hainawo tafura yemafuta iyo iyo inofanirwa neAust settings.
Saka chii chandakaona munyika chaiyo? Ndinogona kutaura kuti haisi iyo Ryzen 7 1700X kana maviri Ryzen 7 1700s kuti ini ndicharova 4.2 GHz pa 1.45v. Ndakaedza nemhepo kunotonhorera uye tsika yangu yemvura yakakura. Yakanga isiri yekupisa kwekutsvaga kwandakanga ndichirova. Ndakanga ndiri nzira refu kubva pakupisa kukuru kwe95 ° C iyo iyo iyo CPU inoda kuputika. Sezvaunogona kuona pasi apa idzi dzaiva mazinga echando zvepasiti ye 4.0 GHz overclock pane imwe neimwe yeRenzen 7 CPUs.
AMD Ryzen 7 CPU kutengesa pa 4.0 GHz
Aiwa, kwandiri ini yaiva kuvharira kwemhepo. Iyo Ryzen 7 1700X yaizoshanda pa 4.0 GHz mukati ma AMDs kukurudzirwa kwe1.45v, iyo Ryzen 7 1700 kune rumwe rutivi rwakakwira kusvika ku1.48v kune rimwechete. Ndakaona kuti pakati pezvikwata uye 3.9 GHz kuwedzera kwezvikwata zvakanga zvakanyatsonaka. Mushure mechiratidzo ichocho uye zvakanyatsooneka neRenzen 7 1700, mhepo inokwidziridza kuti ichisimbirire kune 4.0 GHz chiratidzo yaiva yakakura. Ndakanga ndine shongwe yakadarika pa 3.9 GHZ ne 1.35 v, kutora mutsara we 100 MHz unoda kuti 0.13 iwedzere. Ndisingatauri kuti kudarika kwangu kwakanyanya kuputika kwaive kwakapfupika. Izvo zvandakaita ndizvo zvinopedza nguva shomanana kushanda pamusoro.
AMD Ryzen 7 uye DDR4
Iyo itsva Ryzen 7 CPU, inofambisa zviri nyore kuchengetwa mune zvinotevera.
DRAM Channels DRAM inotonga DIMM Qty. havukavu
Dual Dual 4 1866
Dual Single 4 2133
Dual Dual 2 2400
Dual Single 2 2667
Sezvinyorwa izvi mabheji akawanda emakambani ane zvishoma zvakanyanya zvirongwa zveCDAM muBIOS uye kuvharidzirwa kana kukwana kushandiswa kweawa. Tariro mune remangwana rakapera izvi zvichave zvakasununguka zvishoma. Shoko mumugwagwa nderokuti kusvikira pakatanga AMD yainyanya kuiswa paC CP performance uye iyo inoshandiswa kumutsara we AGESA "inofanira" kuunza kuvandudzwa mukurangarira kwekuita uye kuregererwa kwepabhesi muBIOS. Zvino izvo zvataurwa, hazvibviri kugadzirisa RAM basa sezvazviri ikozvino. Ini ndichabatanidza zvishomanana zvidhori zvepiritsi pasi apa kuratidzira zvibatsiro zvekuvandudza RAM kushanda. Ini handisi kupinda ma mechanics yayo pano asi ndichavhara iyo mune mharidzo yangu inopfuura overclocking.
Gara uchishandura Mutengo weKupera uye wekushandisa nguva
Gadzira uchishandisa BCLK uye bhuku rekushandisa
Heino pfuti ye SuperPi 32M panguva yekupedzisira kuti upe pfungwa yekuvandudza.
SuperPi 32M Ryzen 7 1700X @ 4.0 GHz uye 3300 CL14 DDR4
Kutanga, ini zvirokwazvo ndinozorodzwa kuti mushure mokunge zvose zvinotungamira kusvika pakurongwa uku hatina kupiwa imwe Bulldozer. Handifungi kuti ndiri ndoga mukufunga kuti vazhinji vari pasi pePC vakanga vari kubvumira muchivande kwe AMD kuti vauye nemakwikwi anonyanya kudiwa kudzokera kuforumato yePC desktop uye kubva kwandinogara nhasi, ivo zvechokwadi vane. Iyo Ryzen 7 CPU inonyanya kunyanya uye mari yausingakwanisi kuirova. Mutengo wekushanda kwezvikamu pano unoshamisa kana uchienzaniswa nemakwikwi ayo, uchifunga nezvechikamu chechitatu chemutengo.
Izvo zvataurwa, ndichiri kuona imwe nzvimbo yekuvandudza. Haisi "plug uye kutamba" panguva ino uye inoda kutarisa paunenge uchigadzirisa. Wedzera kune izvozvo zvimwe zvinokonzerwa nekurangarira nyaya kubva kune vashandi vekupedzisira zvishoma zvakagumburwa uye kuvhiringidzika. Zvandinokurudzira kune chero munhu anotarisa kuti apinde mu AM4 platform panguva ino, zvinogona kunge zvakanamatira kune rimwe diki DDR4 2666 kana kuti kutarisa imwe yemakiti matsva anodiwa kuti chikamu ichi chibudiswe naG.Skill - the FlareX ne Fortis mitsara.
Pasi pose, ndinonzwa izvi kukunda kukuru kwe AMD pasinei nemarwadzo mashomanana anokura anokwanisa kutungamira chero imwe nzvimbo itsva. Zvechokwadi vakabva kuburikidza nekushanda kwavo uye vakapa pfuma inoshamisa muPC kana ichienzaniswa nezera ravo rokupedzisira. Kudonha kweTDP kunoshamisa pakuuya ku95 W kana kuti pasi, kana yakafanana mapurisa ari 140 W. Top iyo iripo nemitengo inosarudza kusarudza 8 core 16 thread CPU yakajeka uye iri nyore pachikwata.
AMD RYZEN 7 1700x uye 1700 CPU Review inzvimbo kubva: Overclockers - The Performance Computing Community
Intel Skylake-X (i9 7900X) uye Kaby Lake-X (i7 7740K) CPU Ongororo
Filed Under: Ti FTW GAMING EVGA GTX